Looguma Tilmaami karo Coronavirus: Wadajirnimada iyo Baakaynta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaxaa looma diidi karo Coronavirus-ka: Midnimada iyo Baakaynta
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY
Wadajirka lama huraanka ah iyo baakad ka hortagga coronavirus
Gudoomiyaha Ururka Soosaarayaasha Maandooriyaha (OMÜD) Buğra Sükan wuxuu yiri, “Waxaan soo maray maalmihii aan ubaahanahay midnimo qaran iyadoo ay ugu wacan tahay cudurka dilaaga ah ee coronavirus (COVID-19) ee saameeyay dalkeena. Hawshan, kartoonnada (sanduuqa, buqshadda), oo ay soo saarto waaxdeenna, ayaa loo isticmaalaa baakadaha, gaadiidka iyo kaydinta baahiyaha mudnaanta degdegga ah sida warshadaha, cuntada, nadaafadda, alaabada nadaafadda iyo sahayda caafimaad, kuwaas oo lagama maarmaan u ah bulshada. Qayb ahaan, waxaan si buuxda ula shaqeyneynaa xooggeena oo dhan si aan howshan u hakineynin. ”
Gudoomiyaha OMÜD Buğra Sükan wuxuu yidhi, “Faafida COVID-19 ee aan ku jirno waxay noqotay dhibaato caalami ah. Waxaan uga badbaadi doonnaa geedi socodkan annaga oo ah muwaadin ahaan, inaan sameyno qaybteenna, iyo xirmooyinka dhaqaalaha iyo tallaabooyinka uu waddankeenu keenay. Waqtigan xaadirka ah, waxaa aad muhiim u ah in la ilaaliyo nidaamka bulshada inta aad la dagaallameysid viruska. Annaga, ahaan ahaan, waxaan u aragnaa baahiyaha mudnaanta leh ee bulshada inay qayb ka tahay halgankayaga qaran ee ka dhanka ah dhibaatada hadda jirta. Hawshan xasaasiga ah, baahiyaha muhiimka ah sida cuntada, daawada, nadaafadda iyo sahayda caafimaad waa in la sii wadaa si loo daboolo iyadoon la carqaladeyn. Annaga oo ah qaybta baakadaha korantada leh, waxaan sii wadnaa hawlaheena anagoo u sii deynayna warshadeena kuwo furan, sida aan ugu shaqeyno baakadaha, baakadaha iyo kaydinta agabkan. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan hubinno in baahida gurmadka aan la carqaladeynin. Marka aan fulineyno wax soosaarkayaga, waxaan ilaalinaynaa badbaadada iyo nadaafada shaqaalaheena mudnaanta ugu sareysa, waxaan ka hortageynaa la dagaalanka viruska xarumahayaga, waxaan tababarnaa shaqaalaheena si joogta ahna u eegnaa caafimaadkooda. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo la waafajinayo wareegtada Wasaaradda Caafimaadka, waxaan u oggolaanaa shaqaalaheena qaba xaalado daba-dheeraaday waxaanna dib u eegi karnaa awooddeena wax soo saar. ”
Waxyaalaha ugu badan ee nadaafadda iyo deegaanka baakadeysan: Kaarboor Corrugated
Isagoo tilmaamaya xulashada agabka baakada maanta, halkaas oo nadaafadu ay ku kasbatay muhiimada, Sükan wuxuu yiri, “Kaarboorku wuxuu aad ugu badan yahay nadaafadda iyo deegaanka u wanaagsan agabka baakadaha si looga ilaaliyo cudurka Coronavirus ee saameeya adduunka. kartoonnada jiingado ka ilo la cusboonaysiin karo iyo in nooca loo cusboneysiin soo saaray xanbaarsan yahay mid ka mid ah saddex waxyaabaha kasta oo dalka Turkiga. Heerkan ayaa xitaa ka sarreeya daawooyinka, cuntada iyo waxyaabaha nadaafadda ka shaqeeya. Intaa waxaa u dheer, waxay bixisaa nidaam baakad nadiif ah oo nadaafadeed, labadaba maxaa yeelay waa la isticmaali karaa alaabtana ceyri waa warqad. Sababtoo ah waxay ku dhacdaa heerkul ah 200 ° C ugu yaraan saddex jeer, hal mar inta lagu jiro soo saarista waraaqaha, laba jeer inta lagu jiro soosaarista dheriga. Kadib isticmaalka, baakada waxaa lagu ridayaa heerkul ka sarreeya 200 ° C inta lagu jiro marxaladda dib-u-warshadaynta. Maaddaama ay jiraan heerkul aad u sarreeya iyo codsiyo uumi ah, shey noolaha kama noolaan karo. Hawshan waxaan mar labaad soo aragnay muhiimadda qaab dhismeedka nadaafadda ee kartoonnada hargaha leh. ”
Ha dhihin Maya, Maya, Taksim Kabataş Gaar ahaan Noqoshada Saldhig
Ma jirto jid tareen oo aan lahayn Trabzon
Xarunta Soodhawaynta ee Trabzon
Tareenka degdega ah ee Antalya waa shardi (Video)
Wasiirka Arslan, 1915 Haddii aadan, sida aan ku aragno jidka Dardanelles Bridge No
Dacwad-oogaha ayaa waydiistay jiritaanka nidaam la yiraahdo 'Uma Qabin'
Kuxigeenka AP ee Ismail Ertugdan Haydarpaşa wuxuu taageerayaa dhaqdhaqaaqa midnimada
Xarunta Tababarka Haydarpasa iyo Dayac-tirka
1 May "Maalinta Shaqaalaha iyo Nabadgelyada" Maalinta Dhalashada ee Wanaagsan
Ciidanka Dab-demiska iyo Dhismooyinka TCDD waxaa ku faafay gudaha magaalada Dheecaan